switch ကိုသီးခြားခွဲထုတ်, Composite လျှပ်ကာ, Shrink Cable ကို - Histe
100000+ အစုံ၏နှစ်ပတ်လည် output ကို
အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗို့အားအထီးကျန်မှုပြောင်းလဲခြင်းသည်သတ်မှတ်ချက်များပြည့်စုံသည်၊ မြင့်မားသောနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှာမြင့်မားပြီးကျယ်ပြန့်သည်။ ထပ်ဆောင်းကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင်၎င်းကိုမြင့်မားသောအပြင်အဆင်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Installation နည်းလမ်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ အမြင့် - ၁၀၀ မီတာမှ ၃၀၀၀ မီတာပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် - ၃၀ မှ ၄၀ ℃ (အထူးအအေးခံနေရာများတွင် - ၄၀ မှ ၄၀ ℃) လေတိုက်နှုန်းမှာ ၇၀၀pa (မ ၃၄ မီတာ / ညီမျှ) ငလျင်ပြင်းအား ၈ ဒီဂရီထက်မပိုပါ။ ရေခဲဖုံးအထူသည် ၁၀ မီလီမီတာထက်မပိုပါ။
မြင့်မားသောအရည်အသွေးတင်းမာမှုပေါ်လီမာဆိုင်းငံ့ထားသည့်လျှပ်ကာပစ္စည်းသွယ်တန်းခြင်းဆိုင်းထိန်းစနစ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုယေဘုယျအားဖြင့်လျှပ်ကာအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ ဖန်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ) နှင့်သတ္တုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာသံမဏိခြေထောက်များ၊ သံထုပ်များ၊ အနားကွပ်များစသည်တို့) ဖြင့်ကပ်ထားသည်သို့မဟုတ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာညှပ်ထားသည်။ ပါဝါစနစ်များ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လေထုအခြေအနေများအောက်တွင်ပြင်ပလျှပ်ကာနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ overhead transmission ၏လိုင်းများအပြင်သက်ရှိ conductor များ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်ခွဲရုံများနှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ...
Dropout Cutout မြင့်မားသော Voltage Compound Fuse Dropout Fuse ကို insulator တွင်ရှိသော support များနှင့် fuse tube များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တည်ငြိမ်သောအဆက်အသွယ်များကိုလျှပ်ကာပံ့ပိုးမှုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်တပ်ဆင်ပြီးရွေ့လျားသည့်ဆက်သွယ်မှုကိုဖျူးပြွန်စွန်းနှစ်ခုတွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ဖျူးပြွန်ကို arc-extinguishing tube အတွင်း၊ အပြင်ဖက် phenolic ဒြပ်ပေါင်းစက္ကူပြွန် (သို့မဟုတ်) epoxy ဖန်ပြွန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဖြန့်ဖြူးသောလိုင်းများ၏လမ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းကျဉ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် transformer သို့မဟုတ်လိုင်းများကိုတိုတောင်းသော circuit နှင့် overload မှကာကွယ်ခြင်း၊ နင် ...
အပူကို Shrinkable Protec ...
အပူအအေးခံအကာအကွယ်အဖုံးဘတ်စ်ကားဘားပူးတွဲ Box MPH busbar junction box သည် polyolefin irradiation ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော die shrinkage busbar ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Transformer, arrester, outdoor switch နှင့်အခြားသော power equipment များတွင်အသုံးပြုသည်။ အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည်။ အက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီ၊ ဆားနှင့်အခြားဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ဘတ်စ်ကားချေးခြင်း။ ၂။ ကြွက်များ၊ မြွေများနှင့်အခြားသတ္တဝါသေးသေးလေးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတိုတောင်းသောဆားကစ်အမှားများကိုဖယ်ရှားပါ။ 3. တိုက်ရိုက်ကွာဟမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မတော်တဆထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ပါ။
၂၀၂၀ တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထရန်စဖော်မာလုပ်ငန်း၏ပမာဏသည်ဘီလီယံ ၁၀၀ ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကမ္ဘာ့ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးပစ္စည်းကိရိယာစျေးကွက်ဝယ်လိုအားသည်များသောအားဖြင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ထွန်းသစ်စနိုင်ငံများမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများတိုးချဲ့ခြင်း၊ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၀ ယ်လိုအားတို့သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀.၃ ဘီလီယံမှ ၁ ဒေါ်လာသို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်ထရန်စဖော်မာဈေးကွက်သို့မောင်းနှင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုကတိက： ကျွန်ုပ်တို့သည်ကတိ၊ အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောထုတ်ကုန်နှုန်းသည် ၁၀၀% ဖြစ်ပြီးအာမခံကာလမှာ ၃ နှစ်ဖြစ်သည်။ စာချုပ်ကိုလိုက်နာပြီးစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြည့်ဆည်းပါ။ ခိုင်မြဲစွာ ...